Beesha Sacad Muse oo Madaxweyne Xamar isaga sharaxdey by Yaxye Zakariya(Hadhwanaagnews) Sunday, September 09, 2012 Mohamed Abdullahi Omar hadii maanta cidi dili lahayd sidii ay uugu aari la haayeen beeshiisu ama magtiisa Salaaaam warbaahinta sharafta le:
Beesha Sacad Muse oo Xamar Madaxweyne isaga sharaxdey<?xml:namespace prefix = o />
Mohamed Abdullahi Omar hadii maanta cidi dili lahayd sidii ay uugu aari la haayeen beeshiisu ama magtiisa u doonan la haayeen iminkana ha ogolaadaan in uu iyaga ka tirsan yey meeshana uugu maqanyey si uu Madaxweyne u noqdo denbigaa uu ka galay Somaliland na ay Beesha Sacad muse ka gashey Somaliland? Hadii kale warbaahinta ha u sheegaan
in aannu iyaga metelin lana mag bixin kana tirsaneyn. Waxba yaan qiiqa la isku qarin ee beelo ayeynnu nahay oo ninkii falalka noocaasa ku kaca reer kiisa ayuun baa loo aanaynayaa. Kan kale ee Ahmed Ismail Samatar ee ku dhici kari waayey in uu hooyadii oo bugta ku soo booqdo Gabiley kana qeyb geli kari waayey aaskeedii isagu ifka iyo aakhira midna meel hagaagsan kuma laha. Reer abtigii oo Jibriil Abokor ah ayaa soo koriyey oo schools ka ku darey maantana iyaguu uugu necebyey oo isagu wuxuu ka cabanayaa xanuun aan weli cid kale lagu arag oo caqliga ayuu qaayis ka yahay markuu leeyey Madaxweyne ayaan Xamar u doonanayaa? Isagan beesha Samaroon baa ka mas uula sidii ay u baahin la haayeen in aannu iyaga metelin kana tirsaneyn hadii cidii dili lahaydna aanay mag uuga doonanayn.
Nina heybta kuma raaci karo hooyo aan dhaline ? koonfur ayaan ka doonanayaa Madaxeyne cajiib?Labadan nin ma caafimaad qabaan ee bal beela hoodu waxay ka qabaan ha la ogaado.
In kasta oo ay adagtey in mid koodna Madaxweyne ku soo baxo, hadana hadey ba dhici lahayd miyaan macna heedu ahayn beeshiisina wey daba socotaa oo wey ka daba tegi karaan.
Sacad Muse iyo Gudabiirsi af gaal iyo muslim mid uun keena
By Yaxye Zakariya